Chiitiko Kunyoresa Rant | Martech Zone
Chiitiko Kunyoresa Rant
Chitatu, December 7, 2011 Svondo, Gunyana 30, 2012 Robby Kuurayiwa
Kudzoka mukati megore, pakanga paine chinoshamisa, chinoshamisa, chiitiko chinoshamisa chakatsigira rinotyisa sangano rinonzi Express Employment Professionals. Iyo purogiramu pachayo yaive inesimba mutsara wevatauri, kusanganisira Indy pachake Peyton Manning. Vashandi vakaita chiitiko ichi mushe uye ini ndinofunga kuti boka revanhu rakafadzwa zvisingaiti. Muchokwadi, ini ndinongova nekunyunyuta kumwe chete-uye hazvina chekuita nezuva rechinoitika icho.
Nehurombo, iko kunyunyuta kuri kuita doozy. Ichi chiitiko chaive nerakaipisisa kunyoresa chiitiko. Gara pachigaro chako, iyi ichave yakareba rwendo.
Ini ndaiziva kuti zvaizove zvakashata kubva pakutanga, saka ndakatora mashoma screen screen. Heano maitiro azvakatanga.
Rimwe zuva, ndakawana iyi meseji muinbox yangu. Tora gander uye ubatane neni mushure memufananidzo.
Ini ndinofanira kubvuma, iyi haisi yakaipa email. Iko kudaidzwa kwekuita kungave kuri kure zvishoma pazasi peji, asi iko iko iko kwakashinga, mutsetse mutsamba: Kumbira matikiti ako nhasi. Ivo vanotosanganisira iyo URL yeiyo peji rekunyoresa ipapo mumuviri weiyo email. Izvo zvine hungwaru, nekuti kana ndiri kuverenga izvi pane mbozhanhare kana mumwe munhu akadhindisa email, ndinogona "kudzvanya" iyi link nekuidzokorora!
Saka iko kubatana kwacho kwakaenda kupi? Yakaenda ku…
Iyo Yekumhara Peji
Zvakanaka, kutanga ndaifanira kupfuura nepakati pekumhara peji. Zvakanaka, kumwe kudzvanya kunogumbura zvishoma, asi izvi hazvina kushata. Handina kunyatsoverenga peji rino, ndakangodzvanya bhatani hombe… izvo zvakanditungamira ku…
Panguva ino ini ndakaendeswa zvakare kune rimwe peji rewebhu, iro riine maoodle eruzivo. Heino hurongwa, heino kero yenzvimbo, mepu, madhairekisheni ekufambisa, maficha ehukama kune Express Zvitarise wega:
Asi zvirokwazvo, hapana chimwe cheichi chakanyatsoenderana nazvino. Ini ndichiri kuda "kukumbira matikiti" ndisati ndane hanya nezve zvese izvi ruzivo. Iwo chaiwo madhiraivha ekufambisa kunzvimbo hazvina basa kusvikira ndawana matikiti.
Ini handisi kuzoenda kune yako LinkedIn peji kana kukutevera pa Twitter izvozvi. Ndine chinangwa mupfungwa: kunyoresa chiitiko chako! Tinogona kutaura nezve zvemagariro midhiya kubatanidzwa pashure Ndinotora matikiti angu. Mushure mezvose, haasi zillion here mamwe maPeyton Manning mafeni ari kuyedza kuwana matikiti panguva imwe cheteyo?
Zvakanaka, bhatani rakadzvanywa, izvo zvinonditungamira kune fomu inozivikanwa inonzi…
Iko Chaiko Kunyoresa Peji
Hongu, ndizvo zvandiri kutaura. Unogona kuyeuka kuti ndiri kufarira zano re one-tinya chiitiko kunyoresa. Ini ndinofungidzira ndanga ndichishamisika kuti yepasirese-email email kushambadza kubva kuExpactTarget (ndinokudai imi varume!) Uye yepasi-kirasi chiitiko manejimendi software kubva kuCvent (ndinokudaiwo varume!) Vangadai vasina kuendesa yakasarudzika yekubatanidza iyo inotungamira-kuzadza data rangu. . Pashoma, iwe unoziva yangu email kero!
Zvakanaka, zvirinani ndapedza izvozvi. (Oops, ndoda kurova "kanzura" sezvo yanga iri padhuze kwazvo. Iti, ndinoshuva kuti dai Jakob Nielsen aona izvi seyakaipisisa pfungwa. anopfuura makore gumi apfuura. Kunyange zvakadaro…)
Iyo Yechokwadi Kunyoresa Peji, Inoenderera
Asi sezviri pachena, peji rimwe chete rekunyoresa harina kukwana. Tinoda peji rechipiri nekuda kwechimwe chikonzero.
Zvichida kana vanhu vakasiya fomu kana vangosvika kune ino? Hazvina kuita sekunge fomu racho rinoita chero kusimbiswa chaiko. Hongu, ndakaedza kuisa zip code yaive nemavara ese uye nhamba yakagadzirwa yefoni. Uye ini ndakadzvanya "Sevha neKutevera" (ini ndanga ndichienda ku "Sevha" basa rangu, asi rakange risiri iro basa rakawanda.) Izvi zvinonditungamira ku…
Iyo Inosimbisa Kuti Iwe Waida Kunyoresa Peji
Ehe, pachokwadi ndakataipa zvinhu nemazvo! Ndo zvinotaurwa nepeji rino uye zvinoda kuti ndibaye zvakare.
Zvino isu tinofanirwa kuitwa. Pakupedzisira! Saka ikozvino yave nguva yeiyo
Chirevo Chekunyoresa Icho Chisiri Kusimbisa
Mumavara makuru pane iyo tebhu inotungamira inoti "Kusimbiswa." Asi kana iwe ukaverenga iwo mameseji, andakakuridzira iwe mujira screen pazasi, unogona kuona kuti zvirokwazvo ichi hachisi chokwadi simbiso. Muchokwadi, ikozvino zvinoita kunge mukana we "kukumbira tikiti" uri mukana we "kukumbira mukana wekuva inofungidzirwa tikiti. ”
Ongorora: Ini ndakazotaura kune vamwe vanhu vane Express Vashandi, uye iyi nzira ine musoro mukutarisa kumashure. Ivo vaida kusimudzira chiitiko kune vakawanda vateereri, asi ivo zvakare vaidawo kuyedza uye kuona kuti vanosarudzika vatengi netarisiro zvaive zvekutanga mumutsara. Ndakavaudza kuti mumaonero angu mutauro muemail nekusimudzira hazvina kureva chero sarudzo, uye kuti ndainzwa sekunge ndangopedza maminetsi mashanu enguva yangu. Ini ndinofunga vangangodaro vakaita bhizimusi rehungwaru sarudzo maererano nekusarudza vanopinda zvingave zvakanaka kune bhizinesi ravo, asi ini handisi munhu anofarira mazwi akandiunza kusvika pano.
Zvino, ini ndichiri akanaka asina kufadzwa neiyi kunyoresa system. Kwete chete izvo zvakandiita ndinyore kuburikidza nehafu gumi nemaviri skrini asi ichindibvumidza kuti ndipe zvakanyanya ruzivo rwekunyepedzera, zvinoita kunge haina kugona kuona iro razvino zuva. Kana zvikaitika, handidi kuzotarisirwa kuti ndione pakarenda rangu kuti ndione kana parizvino pamberi kana shure kwaApril 15. Sisitimu yacho inofanirwa kukwanisa kuratidza meseji chaiyo!
Zvisinei, ndapedza. Fembera ini ndichamirira kusvika Chivabvu 2 kuti ndinzwe kana ndawana tikiti. Asi mira, pane iyo…
Email Kusimbiswa Kwandinofanira Kuchengeta
Chokwadi iyi yekunyoresa system inoziva zvandiri. Asi zvakadaro ndinofanira kusevha email yetikiti remahara? Zviripachena kuti ini ndega ndine iyi email kero.
Uye zvirokwazvo iyi yekunyoresa system inogona verenga. Mutsara wekuti "kuwanikwa kwetikiti" unoreva kuti iyo sisitimu haigone kuteedzera huwandu hwezvigaro zvakatopihwa kare!
Musi waApril 22, ndakagamuchira imwe email. Ndakafunga kuti ndinenge ndiri kudzidza kana ndaizogamuchira matikiti. Asi pachinzvimbo, ini ndakawana chimwe chinhu chainyanya kuvhiringidza:
Panguva ino, ndakanga ndisina chokwadi kuti chii chaiitika. Ndakanga "ndakasarudzwa" kuenda kumatikiti enguva dzose, uyezve ndikave nemukana wekupinda mumakwikwi aya? Kuonekwa kwebhatani re "Kumbira Matikiti" pazasi kwaivhiringidzawo. Izvi zvakatungamira kudzokera kune imwechete fomu yandakanga ndatopedza. Saka pamwe kunyoreswa kwangu kwepakutanga kwaive kwakaraswa? Zviripachena ivo vakatumira izvi kukero imwechete yeemail, sezvakaratidzwa mutsoka.
Ndakafunga kusiya zvakanaka zvakakwana ndega. Ndokuzo…
Iyo Chaiyo Kugamuchira Email
Musi waMay 4, ndakawana iyi email meseji. Zvaitaridzika kunge zvaizivikanwa pakutanga, asi ipapo ndakaona kuti ndaive!
Handina kunzwisisa kuti sei vaida kuuya nehofisi yangu kuzondipa matikiti. Ndingadai ndakangodhinda iyo email. Uye mumwe munhu akazviisa pasi pegedhi, asi hapana munhu aive pano panguva iyoyo saka ndinofunga kuti kwaigona kunge kuri kutambisa rwendo.
Ini handigone kukuudza iwe kuti chaiko chiitiko chaive musi waMay 18. Yakakwana munzira dzese. Dzinonakidza hurukuro. Kuuraya kukuru. Nzvimbo yakashongedzwa zvakanaka. Kudya kwakanaka uye kunopa simba. Asi iyo yekutungamira yaive yakaipisisa, kunyanya tichifunga nezvepasirose-kirasi mukurumbira yemakambani maviri akabatanidzwa mukunyoresa kwechiitiko. Chii chaitika?
Ini ndinofunga kuti ExactTarget neCvent zvinongova mapuratifomu, uye iwe unogona kuzvishandisa zvisirizvo sekunge iwe unogona kushandisa zvisiri izvo chero humwe hunyanzvi. Ini ndinofunga pangave paine dambudziko rehurongwa nekumisikidza chiitiko chekunyoresa system uye timu yakaita izvi haina kuwedzera hunyanzvi hunowanikwa kugadzira ruzivo rwekunyoresa. Meseji inofanirwa kuve yakajeka, zvisinei: zviitiko zvikuru zvinofanirwa kuve zvine mutsindo, nyore-kushandisa chiitiko kunyoresa. Icho chikamu chekushambadzira kwako! Vanhu vazhinji vanozove vanowirirana mukati mechiitiko kana zviri nyore kusaina, nyore kuenda, uye nyore kunzwisisa zvaunopa.
Saka zvinopera rant yangu.
Robby Slaughter inyanzvi yekufambisa uye yekugadzira. Tariro yake iri kubatsira masangano nevanhu kuti vabudirire, vabudirire uye vagutsikane pabasa. Robby anogara achipa mumagazini akati wandei uye akabvunzurudzwa nezvinyorwa zvemunyika seWall Street Journal. Bhuku rake razvino nderekuti Iyo Isingakundike Recipe yeMambure Zviitiko.. Robby anomhanya a kuvandudza bhizinesi kubvunza Kambani.
Mutengo we Facebook Kushambadzira
Peji mitsara 2.0 Inodzokororazve WordPress Nyowani uye Ecommerce
Dec 7, 2011 pa 9: 52 AM
Chiitiko ichi chinogona kunge chaishamisa, asi hapana mubvunzo mupfungwa dzangu kuti vakarasikirwa nevakawanda vakanyoreswa munzira nekuda kwematanho anoshungurudza uye asina musoro. Ini handivape pasipoti - zvisinei nekambani yavo nemaitiro acho. Izvo zvavaitaura zvaive zvine musoro kune "ivo"… kwete kuti zvine musoro kune "iwe". Uye "iwe" inofanira kugara ichikosha kupfuura "ivo".
Dec 7, 2011 pa 10: 21 AM
Kudzedzereka. Chinhu chakadai chingadai chakandiita kuti ndisade matikiti chete panheyo yechinhu icho. Asi kana vachida kuendesa matikiti kwandiri, ndichafara kuvapa madhairekisheni. Kutanga vanofanira kupinda mumotokari, uye kutanga kutyaira. Ndichavaudza divi iro mushure mekunge vatyaira mamaira gumi nemaviri.